Captan Markab “Masuul kama ahayn Degitaanka Markabka” – SBC
Captan Markab “Masuul kama ahayn Degitaanka Markabka”
Francesco Schettino oo ah Captankii waday markabka Costa Concordia ayaa doc iskaga riixay eedeyn uga timid mulkiilaha Markabka Dalxiis ee dhawaan ku dagay xeebaha Mediterranean-ka isaga oo sheegay in warkaasi uu yahay Been Abuur la dhoodhobay.
markabka Costa Concordia waxaa lagu weeyay dad tiradooda lagu qiysaasy 29 qof oo aan la ogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigeen iyadoo si rasmi ah loo xaqiijiyay in 6 qof ay dhinteen laakiin kooxaha gurmadka weli ma hellin dadka badan 20 qof la weeyay meel ay mareen.
Kooxaha gurmadka Degdega ah ayaa wada dadaal ay ku baadigoobayaan ilaa dadka la weeyay kuwaasi oo ay ka raadinayaan dhinaca badda iyaga oo wata gadiidka Badda Diyaarado waxaana kooxaha gurmadku ay shaqeeyaan Habeen iyo maalin si loo helo 29 qof oo markabkaas la socday oo la waayey.
Sarkaalka ugu sareeya Ciidamada Badda oo lagu magacaabo Marco Brusco ayaa sheegay in ay jirto rajo ah in la heli doono dadka la weeyay isaga oo sheegay in xaalad degdeg ah ay wadaan oo ku aadan sidii mar uun farxad loo gelin lahaa dadka eheladooda lagu la’ayahay Xeebaha uu markabka dalxiiska ah ku dagey.
Dhinaca kale wasiirka Deegaanka ee Dalka Talyaaniga ayaa waxaa uu sheegay in markabka degan uu siideynayo Dheecaan loo maleynayo shidaal ku qubanaya badda taasi oo uu wasiirku ku tilmaamay mid khatar dhinaca deeganka dhalin karta .
Hadalka Dowlada talyaaniga ee dhinaca Deegaanka ayaa Imanaaya Xilli dad badan oo la socday Markabka Degay ay weli la helin ehelkooda oo markabkaas la socday.